Republic of Ireland vs Serbia - shahaadooyinka Koobka Adduunka | talooyin Bet
taariikhda Match: 5 Sep 2017 | Posted: 5 Sep 15:24 2017 GMT + 2 | Talo viewed 1259 jeer.
Republic of Ireland vs Serbia – shahaadooyinka Koobka Adduunka
Republic of Ireland vs Serbia – shahaadooyinka Koobka Adduunka, Ireland iyo Serbia wareega 8aad ee Group D. Currently labada dhinac ugu horeysay kaalinta. Serbia waa laba dhibcood oo nadiif ah on top ka dib markii ay garaaceen maalin kale guriga daciif Moldova 3:0 halka Ireland qaaday hal dhibic on wadada ee Georgia, 1:1.
Sida iska cad, waayo, Ireland guul suurto gal halkan waa mid muhiimadda weyn. Serbia dhawri doonaa keentay meel xitaa barbaro halka Ireland hadii ay ku guuldareystaan ​​inay ku guuleysato waayi kartaa xitaa kaalinta labaad ama ugu yaraan la xidhan karaa Wales ka dib markii wareega this. Kuwaas oo Wales ciyaari wadada laakiin ka dhanka ah daciif Moldova meesha la filayaa saddex dhibcood. Ma aha in ay ka hadlaan in bishii Oktoobar raaci doona dhigma Wales vs Ireland. Sidaas, in sababta Ireland noqon doona diiradda badan oo ku saabsan weerarka. Laakiin kooxda reer Serbia ayaa sheegay in qof walba sida ay halkaan u dhan saddex dhibcood oo sidaas socday in gacanta qaar ka mid ah si uu u helo kaalinta koowaad iyo si toos ah Visa Koobka Adduunka.
Republic of Ireland vs Serbia – shahaadooyinka Koobka Adduunka,weli, Waxaas oo dhan waa hadal caadiga hadal hadal (labada dhinac) laakiin markii sida ciyaarta ku bilaabatay muhiim ah, in xaqiiqda ah, waxaan sida caadiga ah caadadiisu arko wax in. Waxaan ula jeedaa, marka labada kooxood ay yihiin ”socday kulankii a” in uu inta badan soo baxayso in hab aad u dhawrsataan labada dhinac, ku dhowaad jirin tallaabo ah oo dhan, ugu yaraan in qaar ka mid ah wareega hore. Ka dibna 0:0 qeybtii inta badan ka dhacaan. Kaliya fiiri kulankii shalay ee u dhexeeya Montenegro iyo Romania halkaas oo martida loo baahan yahay guul aad u badan, Romania xitaa guul bay ka tari laheyd teori, oo aysan wax guul xitaa ma teori, sidaa darteed waxaa la filayaa in ay u tagaan ku adag tahay seddex dhibcood. Laakiin xaqiiqadu waxay ahayd ciyaar soo jiidasho leh caajis halkaas oo kooxda innaba lama ceyrsaneysa inay dhib badan tahay guul ah iyo ku dhawaad ​​ilaa iyo dhamaad 0:0.
kulanka ugu horeeya ee ay labada dhinac u dhexeeya Serbia iyo Ireland ciyaaray Belgrade dhammaaday 2:2 sawiri. Dhab ahaantii ma ku qor ciyaarta Waxaan filayaa in ay hadda wax ku arkaa. Marka Serbia ciyaareyso gurigeeda, in inta badan waa hab aad u weerar ka kooxdiisa. Plus, Markaas ka dib, waxay ahaayeen iyada oo goolhayaha ugu horeysay Stojkovic iyo dhallinyarada Rajkovic ahaa goolkiisii. Rajkovic waa aad u tayo badan, laakiin si daacad ah, uu mas'uul ka ahaa labada gool Serbia ayaa laga dhaliyay ka dibna. Haddaba la Stojkovic, difaaca Serbian eegi doonaa hab xoog. jeer nin badbaadiyey kooxda Tani Serbian aad u badan.
All oo dhan, IMO Ireland si dhib awoodi doonaan in ay wax gool ah, Serbia u badan tahay in aan aad u weerar janjeedha, u badan tahay in labada koox aan aad u weerar janjeedha ee ugu horeysay 45 daqiiqo.
Isku aadka qeybtii hore IMO waa bet weyn halkan.
Wigan v Sheffield Wed ( Under 2.5 gool & 1.61 )